Bit By Bit - Ethics - 6.8 Isiphetho
Ucwaningo lwezenhlalakahle kule minyaka yobudijithali luphakamisa izinkinga ezintsha zokuziphatha. Kodwa lezi zinkinga ayinakunqotshwa. Uma thina, njengomphakathi, singahlakulela imikhuba namazinga okuziphatha okwabelwana ngawo asekelwa ngabacwaningi kanye nomphakathi, ngakho-ke singakwazi ukuhlanganisa ikhono leminyaka yobudijithali ngendlela enesibopho futhi enenzuzo emphakathini. Lesi sahluko simelela umzamo wami wokusithuthela kulolu hlobo, futhi ngicabanga ukuthi ukhiye uzoba ngabacwaningi ukuba bathole ukucabanga okusekelwe ezimisweni, ngenkathi beqhubeka nokulandela imithetho efanele.
Esigabeni 6.2, ngichaze amaphrojekthi amathathu ocwaningo lwamadijithali adala ukuphikisana komthetho. Khona-ke, esigabeni 6.3 Ngichaza lokho engicabanga ukuthi yisisisekelo esiyinhloko sokungaqiniseki kokuziphatha ekucwaningweni kwezenhlalakahle ezenzakali-digital: amandla akhula ngokushesha abacwaningi ukugcina nokuhlola abantu ngaphandle kwemvume yabo noma ngisho nokuqwashisa. Lezi zakhono zishintsha ngokushesha kunamasiko, imithetho, nemithetho yethu. Okulandelayo, esigabeni 6.4, ngichaza izimiso ezine ezikhona ezizoqondisa ukucabanga kwakho: Inhlonipho yabantu, inzuzo, ubulungiswa, nokuhlonipha umthetho kanye nentshisekelo yomphakathi. Khona-ke, esigabeni 6.5, ngifingqa izinhlaka ezimbili zokubheka okuphathelene nokuziphatha-ukulandelana kwemvelo kanye ne-deontology-engakusiza ngesinye sezinselele ezijulile ongase ubhekane nazo: nini kufanelekile ukuba uthathe izindlela zokungabaza ngendlela efanelekile ukuze ufeze ngokufanelekile ngokomthetho ukuphela. Lezi zimiso kanye nezinhlaka zokuziphatha kuzokwenza ukwazi ukudlulela okungaphezu kokugxila kulokho okuvunyelwe yimithetho ekhona futhi ukwandise ikhono lakho lokukhulumisana kwakho nabanye abacwaningi kanye nomphakathi.
Ngalesi sizinda, esigabeni 6.6, ngaxoxa ngezindawo ezine eziyinselele kakhulu kubacwaningi bezenhlalakahle zedijithali: imvume yemininingwane (isigaba 6.6.1), ukuqonda nokulawula ingozi yolwazi (isigaba 6.6.2), ubumfihlo (isigaba 6.6.3 ), nokwenza izinqumo zokuziphatha ngokungaqiniseki (isigaba 6.6.4). Ekugcineni, esigabeni 6.7, ngiphetha ngamathiphu amathathu asebenzayo ekusebenzeni endaweni enezimiso ezinganeliseki.
NgokoMthetho we scope, Lesi sahluko egxile nombono i umcwaningi kumuntu ofuna ulwazi generalizable. Ngenxa yalokho, ushiya out imibuzo ebalulekile mayelana ngcono uhlelo lokwengamela elibekwe zesimilo yocwaningo; imibuzo mayelana umthethonqubo we ukuqoqwa kanye ukusetshenziswa kwedatha yizinkampani; futhi imibuzo mayelana ukubhekwa mass ohulumeni. Le mibuzo neminye kusobala eziyinkimbinkimbi nezinzima kakhulu, kodwa ithemba lami lokuthi yemibono ezimisweni zokuziphatha ucwaningo kuyoba usizo kulezi ezinye izingqikithi.